नेपाली छोरा दिवेश पोखरेललाई अमेरिकन आइडल जिताउन भोटका लागि सेयर गरौँ [भिडियोसहित] – Online Nepal
नेपाली छोरा दिवेश पोखरेललाई अमेरिकन आइडल जिताउन भोटका लागि सेयर गरौँ [भिडियोसहित]
May 8, 2020 581
काठमाडौ । विश्वकै ठूलो मानिएको गायन रियालिटी शो अमेरिकन आइडलमा विभिन्न चारणहरु पार गर्दै अगाडि बढिरहेका नेपाली छोरा दिवेश पोखरेललाई अब अगाडि बढ्नको लागि फ्यानको सहयोग आवश्यक पर्ने भएको छ । उनलाई अब फ्यानहरुको भोटको आवश्यकता पर्नेछ जसले उनको अगाडिको यात्रा तय गर्नेछ । दिवेशले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत सबै फ्यानहरुलाई भोट गर्न अपिल गरेका छन् । साथमा उनले आफूलाई यहाँसम्म अघि बढाउन सघाउने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले नेपाललाई विशेष आशा गरेको देखिन्छ ।
Prevपूर्व आइजिपीसँग नाम जोड्ने बिरुद्ध सरुले हालिन मुद्दा
Nextपूर्णिका प्रेममा ! भनिन मैले मेरो सपनाको राजकुमार भेटिसके,पहिलो पटक बोलिन दरवार का,ण्डको बारेमा(भिडियो हेर्नुहोस)
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (61956)